သင်၏ Amazon ebook | တွင် စာအုပ်များဖတ်ရန် သင်သုံးနိုင်သော Kindle ဖော်မတ်များ Androidsis
Kindle ဖော်မတ်များ- Amazon ebook reader ရှိ စာအုပ်များဖတ်ရန် ရွေးချယ်စရာများ
Nerea Pereira | 28/04/2022 14:00 | လဲ tutorial
သင့်တွင် Kindle တစ်ခုရှိသည်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် သင့်စက်တွင် မည်သည့်ဖိုင်များကို ဖွင့်နိုင်သည်ကို သင် သိချင်နေမည်မှာ သေချာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Word document သို့မဟုတ် အခြားသော extension ကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါက ယနေ့တွင် ဘာသာရပ်အကြောင်း အနည်းငယ် ထပ်မံပြောပြပါမည်။ Amazon ပလပ်ဖောင်းတွင် eBooks များအတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖော်မတ်ရှိပြီး အခြားသူများနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ¡Kindle ဖော်မတ်အားလုံးကို ရှာဖွေပါ။
စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်သည့် ပထမဆုံး Amazon e-Reader စက်ပစ္စည်းများသည် ဖော်မတ်ကိုသာ ပံ့ပိုးပေးသည်။ fagot ASW MOBI နှင့် PDF တိုးချဲ့မှုများနှင့်အတူ။
သို့သော်၊ Amazon e-book ပိုင်ရှင်များသည် အခြားစက်ပစ္စည်းများတွင် ဖိုင်များဖွင့်လိုပါက အခြားစက်ပစ္စည်းများ လိုအပ်သောအခါတွင် ပြဿနာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ EPUB သို့မဟုတ် JPEG သို့မဟုတ် PNG ကဲ့သို့သော ရုပ်ပုံအဆက်များ ကဲ့သို့သော ဖော်မတ်များ။ အလွန်အသုံးများသောဖြေရှင်းချက်မှာ အချိန်ဖြုန်းသော်လည်း ပြောင်းလဲခြင်းပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် နောက်ဆုံးပေါ် Amazon စက်များသည် ဖော်မတ်များကို ပိုမိုလက်ခံလာသောကြောင့် ရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။
1 AZW၊ ဤသည်မှာ Amazon ၏ မူရင်းပုံစံဖြစ်သည်။
2 Amazon Kindle နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အခြားဖော်မတ်များ
3 Amazon Kindle ကိုအသုံးပြု၍ EPUB ကိုဖတ်ပါ။
AZW၊ ဤသည်မှာ Amazon ၏ မူရင်းပုံစံဖြစ်သည်။
AZW သည် ကုမ္ပဏီ၏ မူရင်းစက်ပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော မူရင်း Amazon ဖော်မတ်ဖြစ်သည်။ ဤဖော်မတ်သည် ၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဖြန့်ဝေမှုမဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဤဖော်မတ်ကို ပိုမိုကာကွယ်ထားသည်။ ၎င်းမှာ AZW တိုးချဲ့မှုတွင် တည်းဖြတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို DRM ဖြင့် ကာကွယ်ထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ဖိုင်ကိုကူးယူခြင်းမှ တားဆီးကာ တရားမဝင်ပေးပို့ခြင်းကို တားဆီးသည့် ထိန်းချုပ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ဖော်မတ်သည် Windows၊ macOS၊ Android နှင့် iOS ကဲ့သို့သော သုံးစွဲသူများ အသုံးများသော အခြားပလပ်ဖောင်းများနှင့်လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စာသားအပြင် ဂရပ်ဖစ်များ၊ ရုပ်ပုံများ သို့မဟုတ် ဇယားများပါ၀င်သောကြောင့် ဤဖိုင်များတွင် ၎င်းတွင် မှတ်စာများထည့်ခြင်း၊ မျဉ်းသားခြင်းကဲ့သို့သော အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များ၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါ၀င်သောကြောင့် ဤဖိုင်များတွင် စာရွက်စာတမ်းအတွင်း ၎င်းတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။
AZW ဖော်မတ်တွင် KF7 နှင့် KF8 အမျိုးအစား နှစ်မျိုး သို့မဟုတ် ဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမတစ်ခုကတော့ boot ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ MOBI ဖိုင်လေးပါ။ Amazon တွင် သီးသန့် DRM ကာကွယ်မှု ပါရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ဖိုင်များကို ကာကွယ်ထားပြီး အခြား MOBI တွဲဖက်သုံးနိုင်သော စက်တွင် ဖွင့်၍မရပါ။ KF8 ဖော်မတ်ရှိ ဒုတိယတွင် Palm ဒေတာဘေ့စ်ဖွဲ့စည်းပုံအပြင် HTML5 နှင့် CSS3 စတိုင်စာရွက်များပေါ်တွင် အခြေခံထားသော စာသားပါရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည် ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသော ဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် ပထမမျိုးဆက်များဖတ်ရှုနိုင်စေရန် အကြောင်းအရာကို MOBI ဖော်မတ်တွင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။
Amazon Kindle နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အခြားဖော်မတ်များ
ကုမ္ပဏီသည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် မျိုးဆက်များကို လွှင့်တင်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ဖော်မတ်အများအပြားနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်အထိ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် မကြာခဏ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် မလိုအပ်သော ဖိုင်များ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်း မှတ်သားထားပါ၊ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် စက်ပစ္စည်းအဟောင်းတစ်ခုရှိလျှင် ၎င်းသည် ခေတ်သစ်မျိုးဆက်များကဲ့သို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖော်မတ်ပံ့ပိုးမှု ရှိလာမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ၎င်းအတွက် manual ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၏ဖြေရှင်းချက်ရှိပြီး Amazon e-books များနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပုံစံများဖြစ်သည်-
Kindle- AZW၊ PRC၊ MOBI၊ MP3၊ AA နှင့် TXT။
Kindle 2- AZW၊ TPZ၊ PRC၊ MOBI၊ TXT၊ MP3၊ AA၊ AAX နှင့် PDF။
နိုင်ငံတကာ- AZW၊ TPZ၊ PRC၊ MOBI၊ TXT၊ MP3၊ AA၊ AAX နှင့် PDF။
DX- AZW၊ TPZ၊ PRC၊ MOBI၊ TXT၊ MP3၊ AA၊ AAX နှင့် PDF။
နိုင်ငံတကာ DX- AZW၊ TPZ၊ PRC၊ MOBI၊ TXT၊ MP3၊ AA၊ AAX နှင့် PDF။
ကီးဘုတ်- AZW၊ TPZ၊ PRC၊ MOBI၊ TXT၊ MP3၊ AA၊ AAX နှင့် PDF။
DX Graphite- AZW၊ TPZ၊ PRC၊ MOBI၊ TXT၊ MP3၊ AA၊ AAX နှင့် PDF။
Kindle 4- AZW၊ TXT၊ PDF၊ MOBI (အကာအကွယ်မဲ့)၊ PRC (မူရင်းဗားရှင်း)၊ HTML၊ DOC၊ DOCX၊ JPEG၊ GIF၊ PNG၊ BMP (ပြောင်းလဲခြင်းအလိုက်)။
ထိပါ- AZW၊ TXT၊ PDF၊ MOBI (အကာအကွယ်မဲ့)၊ PRC (မူရင်းဗားရှင်း)၊ HTML၊ DOC၊ DOCX၊ JPEG၊ GIF၊ PNG နှင့် BMP (ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်)။
Kindle 5- AZW၊ TXT၊ PDF၊ MOBI (အကာအကွယ်မဲ့)၊ PRC (မူရင်းဗားရှင်း)၊ HTML၊ DOC၊ DOCX၊ JPEG၊ GIF၊ PNG နှင့် BMP (ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်)။
Paperwhite (1st မှ 5th Generation): AZW၊ TXT၊ PDF၊ MOBI (အကာအကွယ်မဲ့)၊ PRC (မူရင်းဗားရှင်း)၊ HTML၊ DOC၊ DOCX၊ JPEG၊ GIF၊
PNG နှင့် BMP (ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်)။
Kindle 7- AZW3၊ AZW၊ TXT၊ PDF၊ MOBI (အကာအကွယ်မဲ့)၊ PRC (ဇာတိ)၊ HTML၊ DOC၊ DOCX၊ JPEG၊ GIF၊ PNG၊ BMP။
ခရီးစဉ်- AZW3၊ AZW၊ TXT၊ PDF၊ MOBI (အကာအကွယ်မဲ့)၊ PRC (ဇာတိ)၊ HTML၊ DOC၊ DOCX၊ JPEG၊ GIF၊ PNG နှင့် BMP။
Oasis- AZW3၊ AZW၊ TXT၊ PDF၊ MOBI (အကာအကွယ်မဲ့)၊ PRC (ဇာတိ)၊ HTML၊ DOC၊ DOCX၊ JPEG၊ GIF၊ PNG နှင့် BMP။
Kindle 8- AZW3၊ AZW၊ TXT၊ PDF၊ MOBI (အကာအကွယ်မဲ့)၊ PRC (ဇာတိ)၊ HTML၊ DOC၊ DOCX၊ JPEG၊ GIF၊ PNG၊ BMP။
Amazon Kindle ကိုအသုံးပြု၍ EPUB ကိုဖတ်ပါ။
EPUB ဖော်မတ်သည် အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်အမျိုးအစားအားလုံးကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အသုံးအများဆုံးဖိုင်ဖြစ်သည်။. သို့သော်၊ Amazon Kindle သည် အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များတွင် အများဆုံးအသုံးပြုနေသော်လည်း ဤစာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစားအတွက် အထောက်အပံ့မရှိပါ။ ၎င်းသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော ဒိုင်နမစ်ချိန်ညှိမှုပါရှိသော အလွန်စွယ်စုံရဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို စခရင်အမျိုးအစားအားလုံးတွင် ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး ထို့အတွက်ကြောင့် စက်များပေါ်တွင်လည်း တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဤဖော်မတ်၏နောက်ထပ်အားသာချက်မှာ ဖိုင်ကိုတရားမ၀င်ကူးယူခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှကာကွယ်ရန် DRM လုံခြုံရေးအလွှာကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Amazon စက်ပစ္စည်းများသည် အသုံးအများဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော ဤဖော်မတ်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ AND၎င်းသည် မူရင်းအကြောင်းအရာကို eBooks များ၏ ခိုးကူးမှုဖြစ်နိုင်ချေနှင့် ဝေးကွာအောင်ထားရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ Amazon စက်တွင် ဤဖော်မတ်ဖိုင်များကို ဖွင့်ရန် တစ်ခုတည်းသော ဖြစ်နိုင်ချေနည်းလမ်းမှာ ဖိုင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အထက်ဖော်ပြပါ ဖော်မတ်များထဲမှ တစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ Calibre ကဲ့သို့သော အခမဲ့ converter ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် ၎င်းဖိုင်ကို ၎င်း၏ အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် Kindle Library သို့ အပ်လုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်မှ ပေးပို့သည့် ဖိုင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
Kindle စာကြည့်တိုက်တွင် စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် သိုလှောင်မှုကန့်သတ်ချက်ရှိကြောင်း မှတ်သားထားသော်လည်း သင်လိုချင်သောစာအုပ်များအားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ အများအားဖြင့် ကျယ်ပေမယ့် စာကြည့်တိုက်ကို ဖျက်စရာမလိုပါဘူး။
Amazon စက်ပစ္စည်းမှ ခေါင်းစဉ်များကို Amazon ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ သို့မဟုတ် Unlimited ဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါရှိသော ခေါင်းစဉ်များကိုလည်း Amazon မှ တိုက်ရိုက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်းဖြင့် စာအုပ်များကို ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။. ဒါပေမယ့် သင့်စက်မှာလိုတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ပိုအဆင်ပြေပြေဖတ်နိုင်စေတဲ့အပြင် ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲ ပရင့်ထုတ်နိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ နာရီပေါင်းများစွာ ဖြုန်းတာက အမြင်အာရုံ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သိသိသာသာ တိုးစေပြီး စာအုပ်ဖတ်ဖို့ အကြံပြုထားခြင်း မရှိပါဘူး။
၎င်းသည် Kindle အပလီကေးရှင်း၏အကောင့်သို့ အခြားဖော်မတ်များဖြင့် တည်းဖြတ်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာရွက်စာတမ်းများကို အပ်လုဒ်တင်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို စက်မှ တိုက်ရိုက်ဖတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်သည် သင့်အကောင့်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာများရရှိရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤကိရိယာသည် အီးမေးလ်တစ်ခုဖန်တီးပြီး ၎င်းသည် သင့်စာကြည့်တိုက်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်မည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးပို့ရမည့်လိပ်စာ သို့မဟုတ် Google Chrome တိုးချဲ့မှု၊ Windows အပလီကေးရှင်း၊ macOS သို့မဟုတ် Android စက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသောအီးမေးလ်သည် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကိုသိရှိရန်၊ သင်သည် စက်ပေါ်ရှိ Menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ဆက်တင်များသို့သွားရပါမည်။. ဤနေရာတွင် သင်သည် Device Options ကိုရွေးချယ်ပြီး Personalize သို့သွားပါ။ ဤနေရာတွင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော အီးမေးလ်အကွက်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ သင်သည် ဤအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့သည့်အခါ၊ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စာရွက်စာတမ်း သိမ်းဆည်းခြင်းကို ဖွင့်ထားသရွေ့ ၎င်းတို့သည် အလိုအလျောက် စင့်ခ်လုပ်ပါမည်။
ဤကိရိယာ သို့မဟုတ်ဤဖိုင်အမျိုးအစားများအတွက် ပံ့ပိုးမှုပေးသည်- MOBI၊ AZW၊ Word (DOC နှင့် DOCX)၊ HTML၊ RTF၊ TXT၊ JPG၊ GIF၊ PNG၊ BMP နှင့် PDF. အီးမေးလ်လိပ်စာ 15 ခုမှ စာရွက်စာတမ်းများ ပေးပို့ရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် ခွင့်ပြုချက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းအရာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်းကဏ္ဍတွင် ၎င်းကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု မှတ်သားထားသော်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ စုစုပေါင်း၊ ပူးတွဲပါဖိုင် ၂၅ ခုအထိ ပါဝင်နိုင်ပြီး စုစုပေါင်း အများဆုံး 25 MB ကို သိမ်းပိုက်ရပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Kindle ဖော်မတ်များ- Amazon ebook reader ရှိ စာအုပ်များဖတ်ရန် ရွေးချယ်စရာများ
မိုဘိုင်းလ်ရှိ ဗီဒီယိုများကို အရှိန်မြှင့်ရန် အကောင်းဆုံး အပလီကေးရှင်းများ
UMIDIGI Fan Festival 2022- ဖုန်းအသစ်များ၊ နားကြပ်များနှင့် လူကြိုက်များသောပစ္စည်းများကို 55% အထိ လျှော့စျေးဖြင့် ရနိုင်ပါမည်